FLV Free in 3GP Converter
> Resource > Free > Top 5 Free FLV in 3GP converters
Qaab file 3GP waa magaca la siiyo si ay u weel file oo ay ku jiraan video iyo files audio labadaba. Aalaaba, files video gudahood weelka 3GP waa MPEG4, halka files audio kala duwanaan karaan. Tirada badan ee casriga ah maalin casriga isticmaali qaabab file 3GP, laakiin, sida ay tahay qaab cadaalad ah oo aan la garaneyn in dadka intooda badan, file wanaagsan barnaamijka diinta lagama maarmaan ah in si fudud u eegto oo aad la shaqeyso. FLV qaab file, ama Flash Video, waa mid ka mid ah inta badan la isticmaalo qaabab video internet-ka, waana qaab doorbido doorashada websites sida Youtube, DailyMotion, iyo wax ka badan.
Iyadoo casriga ah ugu waa ay awoodaan in ay si fudud u ciyaari FLV videos online, si ay dhab ahaantii kala soo bixi iyaga iyo iyaga ciyaaro qalab aad u baahan tahay barnaamij leh tayo video diinta ah. Maqaalkani waxa uu tegi doonaa FLV ugu wanaagsan ee barnaamijyada diinta 3GP, oo dhan 5 ka mid ah kuwaas oo hoos ku qoran.
Si aad u badan oo ku saabsan liiska kor ku bartaan, continue reading!
Heli kombiyuutarada labada Windows iyo Mac, ee Wondershare Video badalo waa yar barnaamijka diinta video fudud ah oo ka badan video tafatirka Suite dhamaystiran. Waxa intaa dheer in diinta videos FLV formatted in 3GP, iyo sidoo kale qaabab kale oo badan, barnaamijka waxaa ku jira video tafatir oo ka shaqeynayaan DVD gubanaya si ay u ogolaadaan isticmaalayaasha inay wax ka bedel iyo abuuro DVDs caado u gaar ah. Waxay ku xidhan karto qalabka video-qabashada, sida kaamirada iyo casriga ah, iyo record video rogtid oo aad computer-waqtiga dhabta ah. Users isticmaali kartaa barnaamijka si aad u qabato oo kala soo bixi videos online oo iyaga loogu badalo in ay qaabkan u baahan yahay.
iSquint waa barnaamij gaar ah loogu celiyaa video files si loogu isticmaalo iPod, iPhone, iyo dhammaan qalabka kale Apple mobile. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan oo socota design isla fududeeyey sida Lugood. Waxa uu u dhigmo QuickTime Pro oo xambaarsan badan oo ka shaqeynayaan isla, laakiin waa wada lacag la'aan ah oo inta badan lagu shido iyo ka badan fududeeyey.
MediaCoder waa diinta video, tafatir, iyo Suite kale loo maqli karo buuxa. Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa in dooxi DVDs, CD-yada, iyo qaabab kale oo badan oo ka mid ah warbaahinta jirka, oo ay tahay in loogu badalo kuwa video files galay ku dhawaad ​​qaab file kasta oo jiritaanka awoodo. Waxaa ka mid ah barnaamij video tafatirka hodan, jidaynayey isticmaala inay astaysto, kor loogu qaado, iyo edit video files ay si ballaadhan. Sababo la xiriira shaqeynta ugu badan, MediaCoder waa mid ka mid ah ugu adag in ay si buuxda u haleelaan, laakiin waa wax istaahila maalgelinta.
MP4 Free Video Converter (Windows)
DVDVideoSoft Free Studio bixisaa dadka isticmaala xaddi weyn oo doorashada ka badan mid ka mid ah entries kale ee liiska this. Qayb kasta oo gaar ah ayaa loo heli karaa oo keliya degsado, ama oo dhan oo iyaga ka soo bixi karaa in mid ka mid ah Suite hal. Haddii user rabo oo kaliya in ay soo bixi Youtube videos, ay kala soo bixi kartaa oo kaliya qayb u gaar ah, laakiin haddii ay doonayaan in ay soo bixi Youtube videos dibna loogu badalo kuwa files ka FLV in 3GP ama qaab kasta oo kale, way soo bixi kartaa Suite oo dhan inay sidaa sameeyaan. The DVDVideoSoft Free Studio waa si gaar ah u fudud in ay isticmaalaan una Socon users talaabo kasta si cad.
Zamzar (Converter Online)
Ugu fudud galo liiskan by fog, Zamzar shaqeeyaa online gaar ah oo aan u baahnayn barnaamij kasta oo lagala soo bixi wax alla wixii. Users si fudud u dooro file ay computer ay u baahan yihiin ee la gediyay, xulo qaab faylka wax soo saarka ay doonayaan u beddelay ah, ku qor email ay, oo guji Beddelaan. Dhammaan shaqada dhabta ah waxay dhacdaa ku servers Zamzar, iyo dadka isticmaala heli doontaa email ah oo ka kooban xiriir ah in ay ka soo dejisan ay file cusub badaley ku dul conpletion. Dhammaan files hoos 100MB loo rogi karaa gebi ahaanba bilaash ah, si kastaba ha ahaatee dadka isticmaala u baahan doontaa in la gaarsiiyo in account lacag si loogu badalo files badan in.
The liiska kor ku kala duwan yihiin shaqeynta iyo fududaato in la isticmaalo labada, iyo habka kaliya ee si dhab ah ogaan fiican ujeedooyin yahay si loo tijaabiyo baxay!